Halyeey Saxaafadeed, Qoraa, Macallin iyo Samafale Soomaaliyeed oo geeriyooday. | Goobsan Media Inc
Home Xulashada Halyeey Saxaafadeed, Qoraa, Macallin iyo Samafale Soomaaliyeed oo geeriyooday.
Halyeey Saxaafadeed, Qoraa, Macallin iyo Samafale Soomaaliyeed oo geeriyooday.
Cabdulqaaddir Maxamed Mursal, oo ku geeriyooday Mareykanku, wuxuu ahaa hal abuur, weriye, macallin iyo farshaxan. Allah ha u naxariistee. aan in badan wada shaqeynay, wax wada barannay, intii burburku jirayna aan marar bandan ku kulannay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa, wakhtiyada qaarna aan iska warqabnay. Sadarradan ayaan ku soo koobayaa qaar ka mid ah xusuusteyda mufakir Mursal.
Cabdulqaadir M. Mursal ma ahayn sideyda oo kale nin markaas uun ka soo baxay Dusgi Sare ee soo dhammaystay sannad Shaqada Qaranka ah. Si uu Jaamacadda u dhigto, Mursal wuxuu wareejiyay xilkii uu u hayay Waaxda Idaacadaha ee Wasaaradda Warfaafinta. Waaxda waxaa hoos imaanayay Radio Muqdisho iyo Radio Hargeysa.
Mursal wuxuu ahaa nin akhlaaq wanaagsan, af suubban, dadka aan ka daba shaqeyn oo ahlu diin ah.
Barnaamijyada Radio Muqdisho ee uu caan ku ahaa intooda bandanna maskaxdiisa ka soo maaxay waxaa ka mid ah Barnaamijka Daljir. Weriyayaal iyo ugu yaraan hal mas’uul oo Xoogga Dalka ka tirsan ayaa ka wada shaqeyn jiray. Sida magaciisa ka muuqata Barnaamijka waxaa lagu guubaabin jiray, wacyi lagula wadaagi jiray, iyaguna farriimo isku weydaarsan jiray halyeeyada Xoogga Dalka Soomaaliyeed ee jiidda soohdinta iyo kuwa kaleba. Mursal wuxuu tegi jiray goobaha ciidanku ku sugan yahay si uu u soo wareysto, una fahmo xaaladda uu ku sugan yahay.
Cali Jaamac Boqorre oo Biology ka dhigi jiray Lafoole ayaa u dhoofay Khaliijka. Halkaas ayuu ku dhegeysan jiray Radio Muqdisho. Isaga ayaa erayada tiriyay una soo diray Barnaamijka Dalmar.
Xikmad iyo laba, guubaabo, waano, dhiirri gelin iyo fan ayay ka heli jireen dhallinyarada waxbarashada iyo shaqada u soo toosay.
Cayaarta kama dambeysta ah ee kubbadda koleyga oo ahayd mid aad u adag oo daqiiqadba ay kooxi horreyso, waxaa isugu soo baxay Kulliyadda Luqadaha iyo Kulliyadda Jaalle Siyaad ee layliga saraakiisha oo loo oggolaa in ay safato tartanka cayaaraha Jaamacadda.
Cayaarta waxaa lagu qabtay garoonka Lucino ee Degmada Cabdalcasiis. Aad ayay daawashadeeda u cammireen ardayda Jaamacadda, Ciidanka Xoogga iyo dadweyne fara badan.
Wuxuu ahaa weriyihii curiyay, hirgeliyeyna halhayska “Dhegeystayaal, Saaxiibbayaal”.
Iyada oo aan dalka Dowladi ka jirin, Hoggaamiyayaal Kooxeed oo ciidan qabiil horboodaya uu qaarba dhinac haysto, magaaladana ay ka soo baxaan Wargeysyo fara badan, ayaan Muqdisho imid 1994. Dood ayaan weriyayaal u qabtay. Su’aalaha aan weydiiyay ayaa waxaa ka mid ahayd in Saxaafadda Muqdisho lagu tilmaami karo xor?
Mursal wuxuu ku hadli jiray afaf shisheeye oo dhowr ah. Wuxuuna ahaa nin Af Soomaaligu ku xeel dheer. Wuxuuna lahaa xirfado dhowr ah oo ay ka mid yihiin sawir gacmeedka iyo sawirka rinjiga loo adeegsado ee painting loo yaqaan.
Geerida Cabdulqaadir Maxamed Mursal waxaan uga tacsiyeynayaa qoyskiisa, xaas iyo carruurba. Waxaa kale oo aan u tacsiyeynayaa Batuulo Maxamed Mursal oo aan iyadana Jaamacadda wada dhigannay iyo dhammaan qoyska reer Maxamed Mursal iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed.
W/Q: Yusuf Garad Omar